Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Star Tanzania Travel Star sambatra any an-tampony
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • News sustainability • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Kintana fitsangantsanganana Zainab Ansell
Ramatoa Zainab Ansell, vehivavy mpizahatany mpizahatany ambony, dia voatonona ho tompon'andraikitra ambony ao Tanzania izay nahavita be teo amin'ny mpiara-miasa aminy teo amin'ny tontolon'ny orinasa COVID-19.
Ramatoa Ansell dia nipoitra ho hany fanatanterahana vehivavy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany mitentina tapitrisa tapitrisa dolara ao amin'ny lisitr'ireo CEO 100 mahomby indrindra ao Tanzania tamin'ny 2021.
Neken'ny orinasa mpitantana, Eastern Star Consulting Group Tanzania izy.
Ireo ekipa jeneraly top 100 dia ho fantatra amin'ny 8 oktobra, noho izy nitana andraikitra lehibe tamin'ny famelana ny harinkarem-pirenena hihemotra taorian'ny krizy COVID-19.
“Ramatoa Zainab Ansell dia iray amin'ireo vehivavy mpanatanteraka mirehitra amin'izao androntsika izao. Nahavita nitantana ny orinasany tamim-pahombiazana tamin'ny rivodoza tamin'ny COVID-19 izy; mendrika deraina maharitra izy, ”hoy ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Star Star Consulting Tanzania, Andriamatoa Allex Shayo.
Ny loka ho an'ny mpanatanteraka 100 voalohany dia mikendry ny hanaiky sy hankalaza ny mpitantana tsirairay, hankasitraka ny fandraisan'anjaran'izy ireo manokana amin'ny toekarem-pirenena, hampirisika ny fanavaozana ary hanatsara ny zava-bitan'ny tontolon'ny orinasa.
Eny tokoa, i Tanzania dia niharan'ny fihenan-karena ara-toekarena, noho ny onjan'ny virus coronavirus izay nanosika orinasa marobe hanidy trano fivarotana, hitondra olona an-tapitrisany ho ao anaty fahantrana. Saingy noho izany no niseho, Ramatoa Zainab dia namorona fonosana vaovao isan-karazany hanambazana ireo mpizahatany ao an-trano, tsena virjiny hadino angamba, mba hahavelona ny orinasany manoloana ny krizy COVID-19 mafy. Ny fanavaozana azy sy ny maodelim-pandraharahana maharitra dia nahatonga ny asa ho velona sy niady tamin'ny fiovan'ny toetr'andro, ary koa nanandratra sy nisy fiatraikany vehivavy an-jatony an-jorom-bahiny tao amin'ireo vondrom-piarahamonina mpizahan-tany ao Tanzania.
Ramatoa Zainab no mpanorina sy CEO an'ny Tanzania monina ao Zara Tours, naorina ary naorina tamin'ny taona 1986 tao amin'ny faritra Moshi, Kilimanjaro, ary izy irery no miady amin'ny famahana ny tsy rariny manan-tantara natambatry ny famoretana sy fanararaotana natao tamin'ny vehivavy tao amin'ny vondrom-piarahamonina Maasai Avaratra tanzania.
Nomena voninahitra izy noho ny famolavolana varavarankely manokana hanampiana ireo vehivavy sahirana sahirana amin'ny fiezahana hanafaka azy ireo amin'ny fahantrana, amin'ny alàlan'ny fangejana mampidi-doza amin'ny fomban-drazana nentin-drazana, amin'ny alàlan'ny fanamafisana ara-bola azy ireo hividianana akora ilaina amin'ny fanaovana vakana sy asa tanana ary hivarotana ireo vokatra ho an'ny mpizahatany.
Amin'ny alàlan'ny ivom-pivoaran'ny vehivavy azy, vehivavy Maasai an-jatony no misitraka ny indostrian'ny fizahan-tany, satria manome fotoana azy ireo hampisehoana sy hivarotra entana tanana amin'ny lalana mankamin'ny toerana fizahan-tany malaza indrindra ao Tanzania. Ity hetsika ity dia nitombo ka lasa andry matanjaka ho an'ny vehivavy sy ity vondrom-piarahamonina mampiantrano manokana ity.
Tamin'ny taona 2009, ny orinasa dia nanangana ny Zara Charity, miverina amin'ireo vondrom-piarahamonina voahilikilika ao Tanzania ary manao ny diany manoloana ny hetsika manerantany ho an'ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra. Ny fiantrana dia miompana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, fanabeazana, tsy an'asa ary ireo fanambin'ny vehivavy sy ny ankizy. Zava-doza an'arivony no niantraikan'i Zara tany Tanzania, mampiasa olona 1,410 mivantana na amin'ny vanim-potoana maharitra, amin'ny famelomana fianakaviana an'arivony ao amin'ny firenena manana taha ambony amin'ny tsy an'asa.
Fantatra ihany koa i Zara noho ny ezaka nataony tamin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra fizahan-tany any Afrika, miaraka amin'i Zainab izay nahazo loka marobe, nahazo loka 13 avy eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Anisan'ireny ny World World Market Market (WTM) Humanitarian Award sy ny Business Entreprenor de la Year Award (2012), ny fizahan-tany fizahan-tany ho an'ny The Future Awards (2015), ary ny Travel Africa 100 Top Women. Andriamatoa Zainab dia nekena ary nomena ny maha vehivavy manan-kery indrindra amin'ny asa aman-draharaha sy ny governemanta avy amin'ny CEO Global noho ny zava-bitany tamin'ny East Africa's Tourism and Leisure Sector 2018/2019 nandritra ny CEO GLOBAL Pan Africa Awards, ary ny Tanzania National Parks koa dia nanaiky an'i Zara Fitsangatsanganana ho mpandraharaha fitsangantsanganana tsara indrindra any Afrika Atsinanana (2019).
Ny Fikambanan'i Tanzania an'ny Tour Operators CEO (TATO), Andriamatoa Sirili Akko, dia nilaza fa ny fikambanany dia mirehareha amin'ny mpanorina sy CEO an'ny Zara Tours noho ny fony malala-tanana hanohana ireo sahirana.
Stanley kwai hoy:
September 30, 2021 ao amin'ny 04: 53
Mendrika ny handresy i Mama Zara..dia nanampy ny fiaraha-monina tamin'ny fomba isan-karazany izy
September 29, 2021 ao amin'ny 14: 23
Alice Efata hoy:
September 29, 2021 ao amin'ny 13: 15
Zara Tours no aingam-panahy amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Na eo aza ny krizy aretin-tratra dia nitazona ny lohany izy, vehivavy matanjaka sy matanjaka izaitsizy izany.
I Mama Zainab dia mendrika ny handresy amin'ny fifaninanana Big i mean Big !!!
Hery Choga hoy:
September 29, 2021 ao amin'ny 13: 06
Miarahaba anao betsaka ry mama, mendrika izany ianao. Tena ankasitrahanay ny ezaka ataonareo.
September 29, 2021 ao amin'ny 12: 58
Raha tsy i mama no mpandresy, manontany tena aho hoe iza koa no ho iza. Misafidiana an'i mama Zara anio ary avelao izy hanome aingam-panahy bebe kokoa an'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny💫. Mama Zara ho an'izao tontolo izao💫💫💫
Maisha k. Francis hoy:
September 29, 2021 ao amin'ny 09: 28
Raha vao miresaka momba ny fitsangatsanganan'i Zara ianao dia miresaka momba ny orinasa mpizahatany lehibe sy lehibe any tanzania sy Afrika atsinanana manontolo. Zainabu Ansell amin'ny maha talen'ny fitantanana azy dia vehivavy matanjaka sy matanjaka. azo antoka fa mendrika ny handresy amin'ny fifaninanana izy
Inno Mtui hoy:
September 29, 2021 ao amin'ny 08: 14
Na eo aza ny areti-mandringana dia afaka nanome asa ho an'ny Tour Guides, mpanefy tanimanga ary asa maro hafa izy. Miarahaba an'i Mama Zara
September 29, 2021 ao amin'ny 08: 11
Tena nanohana ny vondrom-piarahamonina manodidina azy izy. Tena mendrika ny ho ambony izy
Zakiah chomboo hoy:
September 29, 2021 ao amin'ny 06: 53
Tsy maintsy mandresy amin'ny fifaninanana i Zainab Ansell satria tena tsara ny fitsangantsanganana ao Zara ary manampy fiantrana ihany koa